Kuzo zonke iintlobo zemeko apho kufuneka khona ukuhanjiswa kolwelo ngokuchanekileyo, inkunkuma yethu encinci yokuhambisa umbhobho kunye nezixhobo zombhobho ezincinci zinokuqonda ukuhanjiswa kolwelo ngokuchanekileyo kunye nokusetyenziswa. Iyahambelana neempawu zepipette ezininzi, i-Eppendorf, iBrand, iGilson, iRainin, iThermo, iKrypton icebo lokucoca ipipette eligcwaliswe ngokuzenzekelayo ngesihluzo esinye se-hydrophobic ukukhusela ii-aerosol kunye nolwelo ekufikeleleni kwi-pipette shaft. Ukongeza, isihluzo sikhusela ukungcoliseka komnqamlezo phakathi kweesampulu. Njengoko ukuchaneka kunye novavanyo lwesampulu zihlala zisanda, iingcebiso zeepipette ezicociweyo ziba yindawo eqhelekileyo kulungiselelo lwelebhu.
Yenziwe kwigumbi elinamakhulu lamawaka kwigumbi elingena uthuli, inkqubo esemgangathweni yokuvelisa ishenxisa yonke imithombo yangaphandle yongcoliseko. Iingcebiso zokucoca ezisezantsi zikaKrypton, ukugcwalisa iingcebiso zeefilitha, iingcebiso zeefilitha ezinde ubude ziyafumaneka. Uluhlu lwevolumu luvela kwi-10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 1000 ul, 1250 ul, 5 ml ukuya kwi-10 ml. Zonke iingcebiso zokucoca ngeKrypton zilungele i-PCR, i-Qpcr, kunye novavanyo lwesampulu olunobuthathaka. Zicocwe nzulu yi-E-beam ukufikelela kwinqanaba le-SAL 10-6, i-RNase-free, DNase-free, Non-pyrogenic, Non-Toxic
Ukhetho grade zonyango ngaphaya ngaphaya izinto PP, imodyuli eziphathekayo iphezulu, imveliso ayiguquki.
Udonga lwetyhubhu yemveliso luthambile, ngaphandle kodonga oluxhaphakileyo.
Unokukhetha intloko yokutsala ngaphandle kwesihluzo okanye ngecebo lokucoca ulwelo, intloko yokufunxa eqhelekileyo okanye intloko eyandisiweyo yokutsala, ukucoca okanye ukufunxa okungafunisi nzalo kunye nezinye iinkcukacha.
Isihluzo sokugcina iZero, ukusebenza ngokukuko kwandiswe
Ukugcina izinto ezincinci zesampulu
Umbala womzimba webhubhu unokukhethwa
Yenziwe ngezinto ezingafunekiyo ze-USP Plastic Class VI Polypropylene
Iyahambelana noninzi lweepipette brand Eppendorf, Brand, Gilson, njl.
Ukuzaliswa ngokuzenzekelayo ngefilitha enye ye-hydrophobic ukukhusela ii-aerosols kunye nolwelo ekufikeleleni kwi-pipette shaft
Inkqubo yokuvelisa esemgangathweni isusa yonke imithombo yangaphandle yongcoliseko
Uluhlu lwevolumu luvela kwi-10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 1000 ul
Ilungele i-PCR, i-Qpcr, kunye novavanyo lwesampulu olubuthathaka
I-e-beam engenazintsholongwane ukufikelela kwinqanaba le-SAL 10-6
Non-pyrogenic, engekhoyo ityhefu
HAYI. Inkcazo Umthamo Umbala Ukusetyenziswa Inzalo Ukupakisha / Ctns
Ikhompyutha Iingcebiso malunga nepipette 10ul Kucacile UEppendorf Gilson ukhetho 4800
PC0036 Iingcebiso malunga nepipette 20ul Sula okanye tyheli UEppendorf Gilson ukhetho 4800
PC0037 Iingcebiso malunga nepipette 100ul Kucacile UEppendorf Gilson ukhetho 4800
PC0038 Iingcebiso malunga nepipette 200ul Sula okanye tyheli UEppendorf Gilson ukhetho 4800
Ikhompyutha Iingcebiso malunga nepipette 1000ul Ecacileyo okanye eblowu UEppendorf Gilson ukhetho 4800
Yiya kwi-PC1081 Iingcebiso malunga nepipette 300ul Mnyama UTecan Hamilton ukhetho 4800
PC1082 Iingcebiso malunga nepipette 1000ul Mnyama UTecan Hamilton ukhetho 4800
Egqithileyo Itywina leplate
Okulandelayo: Ityhubhu yePCR
Iingcebiso zePC0035 10ul pipette ngesihluzi Iingcebiso zePC0036 20ul pipette enecebo lokucoca ulwelo Iingcebiso zePC0037 100ul pipette enecebo lokucoca ulwelo
Iingcebiso malunga nePC0038 200ul pipette enecebo lokucoca ulwelo Iingcebiso ze-PC0039 1000ul pipette ngesihluzi Iingcebiso zePC1082 1000ul pipette emnyama i-conducitv